admin – Page 21 – ကရင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်
ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း ၁။ အမည် – ဦးစောဝင်းထိန် ၂။ အခြားအမည် – မရှိပါ` ၃။ လူမျိုး/ဘာသာ – ကရင် / ဗုဒ္ဓဘာသာ ၄။ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေး ကတ်ပြားအမှတ် – ၃/ဖပန(နိုင်)၀၀၀၉၃၂ ၅။ မွေးသက္ကရာဇ်/အသက် – ၂၀ . ၉ . ၁၉၆၇ (၄၉)နှစ် ၆။ မွေးဖွားရာဇာတိ – ကတိုင်တိကျေးရွာ၊ ဖာပွန်မြို့နယ် ၇။ ပညာအရည်အချင်း – သိပ္ပံဘွဲ့(ဓါတုဗေဒ) ၈။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် – ခေတ္တပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်၊ ကရင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ၉။ အဘအမည်၊ အလုပ်အကိုင် – ဦးလှသင်း (ကွယ်လွန်) ၁၀။ အမိအမည်၊ အလုပ်အကိုင် – ဒေါ်နော်ဖွားညွန့်၊ ပညာရေး(ငြိမ်း) ဆက်လက်ဖတ်ရှု့ရန်
Posted on June 26, 2019 December 4, 2019 Author admin	184 Views
ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း ၁။ အမည် – ဦးအိုက်ကျန်ခမ်း ၂။ အခြားအမည် – မရှိပါ ၃။ လူမျိုး/ဘာသာ – ရှမ်း / ဗုဒ္ဓဘာသာ ၄။ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေး ကတ်ပြားအမှတ် – ၃/မဝတ(နိုင်)၀၀၈၅၅၀ ၅။ မွေးသက္ကရာဇ်/အသက် – ၂၄ . ၅ . ၁၉၇၃ (၄၃)နှစ် ၆။ မွေးဖွားရာဇာတိ – ဝှေ့ရှမ်းကျေးရွာ၊ မြ၀တီမြို့ ၇။ ပညာအရည်အချင်း – ဒုတိယနှစ်(ပထဝီဝင်) ၈။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် – လယ်ယာ ၉။ အဘအမည်၊ အလုပ်အကိုင် – ဦးအင်ကရောက်၊ လယ်ယာ ၁၀။ အမိအမည်၊ အလုပ်အကိုင် – ဒေါ်ကျန်ဖေါင်း၊ လယ်ယာ ၁၁။ ဆက်လက်ဖတ်ရှု့ရန်
Posted on June 26, 2019 December 4, 2019 Author admin	144 Views
ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း ၁။ အမည် – ဦးတင်မျိုးဦး ၂။ အခြားအမည် – ကိုမျိုး ၃။ လူမျိုး/ဘာသာ – ဗမာ + မွန် / ဗုဒ္ဓဘာသာ ၄။ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေး ကတ်ပြားအမှတ် – ၁၀/မဒန(နိုင်)၀၂၃၈၄၂ ၅။ မွေးသက္ကရာဇ်/အသက် – ၂၇ . ၅ . ၁၉၇၂ (၄၄)နှစ် ၆။ မွေးဖွားရာဇာတိ – တံခွန်တိုင်ကျေးရွာ၊ မုဒုံမြို့နယ်၊ မွန်ပြည်နယ် ၇။ ပညာအရည်အချင်း – ဝိဇ္ဇာဘွဲ့(ပထဝီဝင်) ၈။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် – စျေးရောင်း၊ ခြံစိုက်ပျိုးရေး ၉။ အဘအမည်၊ အလုပ်အကိုင် – ဦးတင်မောင်(ကွယ်လွန်) ၁၀။ အမိအမည်၊ အလုပ်အကိုင် – ဆက်လက်ဖတ်ရှု့ရန်
Posted on June 26, 2019 December 4, 2019 Author admin	166 Views
ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း ၁။ အမည် – ဦးစောချစ်ခင် ၂။ အခြားအမည် – မရှိပါ ၃။ လူမျိုး/ဘာသာ – ကရင် / ဗုဒ္ဓဘာသာ ၄။ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေး ကတ်ပြားအမှတ် – ၃/လဘန(နိုင်)၀၇၃၃၇၈ ၅။ မွေးသက္ကရာဇ်/အသက် – ၈ . ၄ . ၁၉၅၅ (၆၁)နှစ် ၆။ မွေးဖွားရာဇာတိ – ကိုမောင်ကျေးရွာ၊ လှိုင်းဘွဲမြို့နယ် ၇။ ပညာအရည်အချင်း – B.A, BED (Eng) ၈။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် – ပညာရေး(ငြိမ်း) ၉။ အဘအမည်၊ အလုပ်အကိုင် – ဦးရွှေထွန်း(ကွယ်လွန်) ၁၀။ အမိအမည်၊ အလုပ်အကိုင် – ဒေါ်သိန်းတင်(ကွယ်လွန်) ၁၁။ ဆက်လက်ဖတ်ရှု့ရန်
Posted on June 26, 2019 December 4, 2019 Author admin	239 Views
ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း ၁။ အမည် – ဦးမင်းကိုခိုင် ၂။ အခြားအမည် – ဦးမောင်ခိုင် ၃။ လူမျိုး/ဘာသာ – ဗမာ / ဗုဒ္ဓဘာသာ ၄။ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေး ကတ်ပြားအမှတ် – ၃/ကကရ(နိုင်)၀၁၀၆၁၄ ၅။ မွေးသက္ကရာဇ်/အသက် – ၂၇ . ၇ . ၁၉၇၀ (၄၆)နှစ် ၆။ မွေးဖွားရာဇာတိ – ဘားအံမြို့ ၇။ ပညာအရည်အချင်း – ဝိဇ္ဇာဘွဲ့(ပထဝီဝင်) ၈။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် – စားဖျော်လုပ်ငန်း(ငြိမ်း) ၉။ အဘအမည်၊ အလုပ်အကိုင် – ဦးထွန်းသိန်း(ကွယ်လွန်) ၁၀။ အမိအမည်၊ အလုပ်အကိုင် – ဒေါ်ခင်မြင့်(ကွယ်လွန်) ၁၁။ ဇနီး/ခင်ပွန်းအမည်၊ အလုပ်အကိုင် – ဆက်လက်ဖတ်ရှု့ရန်
Posted on June 26, 2019 December 4, 2019 Author admin	199 Views